Ogaden News Agency (ONA) – Dagaala xoogan oo aagga Galaalshe ka dhacay 19-20kii bishan oo cadawga si weyn loogu jabiyay
Dagaala xoogan oo aagga Galaalshe ka dhacay 19-20kii bishan oo cadawga si weyn loogu jabiyay
Wararka naga soo gaadhay Ogaadeeniya ayaa sheegay dagaalo xoogan oo into badan ka dhacey Deegaanka Galaalshe iyo Deegaanada ku hareeraysan in cadawga uu ka soo gaadhay khasaare laxaadleh. Askarta lagaga dilay dagaaladan inta la hubsaday waxay gaadahayaan wadar ahaan 86 askari oo isugu jira darajooyin kala duwan.
Dhagaaladaasi ayaa udhacay sidan;
20/02/2013 Weerar xoogan oo ay ku qaadeen Cutub katirsan NH/CWXO Askar kuwa gumaysiga Ethiopia ah oo ku sugnaa Magaalada Galaalshe ayaa waxaa Askarta gumaysiga Ethiopia lagaga dilay 15 Askari waxaana lagaga dhaawacay 20 kale.
isla maalintaas 20/02/2013 Jid gooyo loo dhigay gurmad kuwa gumaysiga Ethiopia ah oo usoo gurmaday askarta wayaanaha ee lagu weeraray magaalada Galaalshe ayaa waxaa lagu helay Deegaanka lagu magacaabo Gaaraagari oo Galaalshe ka tirsan, waxaana dagaal aad u culus jilibkana la isku aasatay oo halkaasi ka dhacay Askarta gumaysiga Ethiopia lagaga dilay 40 Askari waxaana lagaga dhaawacay inta la hubo 19 kale, kuwaasi oo dhaawacooda lageeyey magaalada Jigjiga,
20/02/2013 Dagaal aad u culus oo isna ka dhacay Deegaanka Garsa oo Galaalshe udhow ayaa waxaa askarta gumaysiga Ethiopia lagaga dilay 27 Askari waxaana lagaga dhaawacay askar kale oo aan tiradooda rasmiga ah laxaqiijin.
19/02/2013 Gudaha Magaalada Fiiq oo ay galeen hadhcad NH/CWXO ayaa waxay askarta gumaysiga Ethiopia kagaga dileen 2 Askari waxayna kagaga dhaawaceen 3 kale.
20/02/2013 Dagaal ka dhacay Caws-macaan oo aan sidaasi uga fogayn magaalada Fiiq ayaa waxaa askarta gumaysiga Ethiopia lagaga dily 1 Askari waxaana lagaga dhaawacay 2 kale.
20/02/2013 Xirsi-food oo Awaare udhow waxaa lagu dhaawcay hal askari oo kuwa gumaysiga modow ah